Sawirka kaamerada loo qariyay shabeel oo noqday midkii ugu fiicnaa sannadkan | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Sawirka kaamerada loo qariyay shabeel oo noqday midkii ugu fiicnaa sannadkan
Si aad u sawirto noolahan dunida ku yar ama aan inta badan la arag, waa in aad leedahay xirfad aan caadi ahayn iyo hal abuur. Waana in aad noqoto qof si wayn nasiib u leh.
Sergey Gorshkov waa qof leh labadaasba – sida ka muuqata sawirka uu ka qaaday shabeel ku nool gudaha fog ee keyn ku taalla bariga fog ee Ruushka. Waa Shabeelka Siberia ama loo garanayo Amur.
Sawirkaas wuxuu ku guuleystay midka sannadka ee duurjoogta.
Shabeelka oo dhedig ah, ayaa la arkay iyadoo laabta gashaneysa geed ay ku xoqaneysay si ay waxa jirka ka cunaya isaga reebto, meeshana ay sumad ugu sameysato. Waa keynta wayn ee Shabeelka ee dalkaas.
“Iftiinka, midabka iyo dareenka meesha jira – waa sida in gacanta lagu sameeyay,” ayay tiri guddoomiyaha Guddiga kala xulista sameeyay ee WPY, Roz Kidman-Cox.
“Waa sida in shabeelka uu ka mid yahay keynta. Seenteeda waxay ka mid noqotay xididada geedka. labaduba waxay isku noqdeen mid,” ayey BBC u sheegtay.
Waxa cajiibka ayaa ah in sawirkan ay qaaday kaamero lagu qariyay geedaha dhexdooda. Kaamerada ayaa meel la dhigay ka dibna waa laga tagay, waxayna si joogto ah u qaaday sawirro, markii shabeelka uu meesha yimid.
Dabcan, Sergey wuxuu gartay meesha ay u badan tahay in noolahan uu yimaado uuna kaamerada u dhigo – Waa meeshaas halka laga ogaado xirfadda cajiibka ah ee uu leeyahay qof khabiir ku ah sawir ka qaadidda duurjoogta.
Shabeelka Bariga Ruushka waa mid la ugaarsado, wuxuuna ku dhow yahay in uu dunada ka dabargo’o. Sidoo kale wixii ay cuni lahaayeen ayaa meesha ka sii dhammaanaya, haddaba waa in Amurs ay illaa meel fog safraan si ay cunto u helaan.
Waxaa sidoo kale dhib ah in meel amni ah la dhigo kaamerada sawirkan qaaday. Ogowna, kaamerada qaaday sawirka cajiibka ah ee sannadkan noqday midka ugu sarreeya, waxay meesha taalla muddo 10 bilood ah ka hor intuusan mimorigii ku jiray uusan buuxsamin.
Si aad u noqoto sawir-qaade cajiib ah ee dhanka duurjoogta, waa in aad noqotaa qof dulqaad badan.
Guusha cajiibka ah ee Sergey waxaa ku dhawaaqay, Amiiradda Duchess of Cambridge iyo soo jeediyaha barnaamijyada telefishin ee Chris Packham iyo Megan McCubbin. Waxaana laga shaaciyay munaasabad dhanka online-ka lagu qabtay oo ka dhacday Madxafka Taariikhda Damiiciga ah ee London.
Sawirkan dabacada yar ee cuneysa boolaboolada wuxuu guul u soo hoyay Liina oo u dhalatay Finland. Waxay heshay guusha 15-17 sano jirrada sawirrada ka qaada duurjoogta iyo abaalmarinta heerkeedu sarreeyo ee dhallinta sawirta duurjoogta.
“Guddiga go’aanka gaaray waxay ka heleen sawirkan sababtoo ah qofka sidan sameyn kara waa keli qof da’yar oo jecel arrimaha dabiiciga ah ee deegaanka,” ayey tiri Roz Kidmand-Cox.
Waa daanyeerkan yar oo ah nooca sanka dheer leh. Wuxuu ka mid yahay sawirrada sannadkan ku guuleystay abaalmarinta WPY ee duurjoogta.
Sawirka waxaa laga qaaday keynta daanyeerada ee Sabaax, ee dalka Borneo. Sankiisaa wuu sii dheeraanayaa, marka uu sii weynaado daanyeerkan. Codka ugu dheer ayuu yeelanayaa, wuxuuna ku helayaan astaanka ka muuqata kooxdiisa.
WPY maysan eegin keliya xaywaannada. Sawirkan waxaa laga qaaday Waqooyiga Yurub oo markasta uu ka jiro foolkaano. Wuxuu noqday sawirka ugu fiican ee dhanka bay’ada iyo dhulka.
Luciano Gaudenzio wuxuu u dulqaaday kuleylka iyo dhulka holcayay si uu sawirkan u qaado.
Raha noocan ah ee cunaya caara-caarada wuxuu ku guuleystay abaalmarinta WPY ee dhanka dabeecadda: Lafdhabarleyda iyo Xamaaratada.
Jaime wuxuu sawirkan ka qaaday xarunta noolaha ee dalka Ecuador – waxay ahayd xilli aroor ah oo roob culus uu da’ayay. Wuxuu dallad ku qabsaday hal gacanta halka gacanta kalena wuxuu ku qaaday sawirkan.
Si loo sawirro labadan cayayaan ee ku nool Normandy, waqooyiga Faransiiska, waxaa loo baahan yahay kaamera leh qalab sawir qaade oo si degdeg ah u qaban kara cayayaankan duulaya.
Sawirkan oo uu qaaday Frank Deschandol wuxuu ka mid yahay kuwa ku guuleystay dabeecadda Cayayaanka.
Sawirrada biyaha hoostooda laga qaado waxaa sannadkan 2020-ka ku guuleystay midkan laga qaaday noolahan.
Songda wuxuu xilli habeen ah sawirkan ka qaaday xeebta Anilao, ee dalka Philippines.
Kuwan waa bisadaha loo garanayo Pallas ama manuls, kuwan oo laga helo meelaha fog ee Qinghai-Tibet Plateau, Waqooyi-Galbeed, Shiinaha.
Shanyuan wuxuu qaaday sawirkan ay yaanyuurahan ciyaarayaan, ka dib lix sano oo uu daba socday, uuna baranayay dhaqanka noolahan. Sawirkan wuxuu helay guusha Dabiicadda Naasalayd
Sida caadiga ah, abaalmarinta dadka guuleysta waxaa lagu bixin jiray munaasabad lagu qabto South Kensington.
Balse sannadkan waxaa lagu bixinayaa si muuqaal ah, maadaama Coronavirus uu saameeyay isu socodka dunida.
Sidoo kale, tartanka sawirka ugu fiicanad ee sannadka 2021 ayaa la billaabay Isniinta, waxaana bilowday in dadka ay sawirradooda soo diraan.
Previous articleAzerbaijan oo sheegtay inay burburisay xarumo ku yaalla dalka Armenia oo laga soo rido gantaallo
Next articleMadaxweynaha Koonfur Galbeed oo Xarunta Madaxtooyada ku qaabilay Wafdi uu Hogaaminayey Wakiilka Qaramada Midoowey Soomaaliya James Swan
War Deg Deg ah Ra iisal wasaee Kheyre oo Galinka Danbe...